Haddii aad nagala shaqayn waydo dib u celintaada - Migrationsverket
/ Haddii aad nagala shaqayn waydo dib u celintaada
Om du inte samarbetar för att återvända – somaliska
Haddii aad nagala shaqayn waydo dib u celintaada, laanta socdaalku waxay xaq u leedahay inay yarayso taakulada lagu siiyo maalin kasta, inay ku saarto dabagal, inay kuu qaaddo meel lagugu xidho ilaa iyo inta safarka laga hirgalinayo, iyo /ama waxay masuuliyadda dib u celintaada u gacan galinayaan booliska.
Dabagal waxaa loola jeedaa waxaa lagaa rabaa inaad iska xaadiriso wakhtiyo go’an iyo meelo go’an si joogta ah. Sidoo kale waxay noqon kartaa inaad dhiibto baasboorkaaga ama dikuminti kale oo aqoonsi.
In Laguu qaado meel lagugu xiro waxaa loola jeedaa waa lagu xiri doonaa waxaadna joogi doontaa goob xiran oo ay maamusho laanta socdaalku.
Akhri waxbadan oo ku saabsan xirista iyo dabagalka
Boolisku waxay la wareegi karaan masuuliyadda dib u celintaada
Haddii ay suuragal nooqn waydo in la sameeyo masaafurinta iyadoo ay sababtu tahay wada shaqayn lagaa waayay, laanta socdaalku booliska ayaa waxay u gacan galin kartaa masuuliyadda ka bixitaankaaga wadanka. Haddii aad dhuumato, boolisku wuxuu xaq u leeyahay inuu kuu jaro waar oo uu ku raadiyo. Boolisku sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay inuu xoog isticmaalo si uu wadanka kaaga saaro.
Haddii booliska la siiyo masuuliyadda masaafurintaada, waa inaad iyaga la xiriirto haddii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan dib u noqoshadaada.
Waxaa lagaa mamnuuuci karaa inaad markale dib usoo gasho
Haddii wada shaqyan lagaa waayo laanta socdaalku waxay go’aansan kartaa in laguu soo saaro mamnuucitaan ah inaad dib u soo noqoto. Tan macnaheedu waxaa weeyo inaadan u socdaali karin wadan ka mid ah wadamada shangan, Romania ama Bulgariya muddo gaargaarsiisan hal ilaa shan sano. Inta ay dherer la egtahay wakhtiga lagaa mamnuucayo inaad dib u soo gasho waxaad ka heli kartaa warqadda go’aanka ee lagu siiyo.
Akhri waxbadan oo ku saabsan mamnuucista dib u soo galidda, sida la isaga ilaaliyo inay arinkaasi kugu dhaco
Akhri waxbadan oo ku saabsan taageerada dib isu soo aas aasidda